Video ‘सोनिकाले पारसको १२ लाख चोरेको’ भन्दै समाचार सार्वजनिक भएपछि… (भिडियो हेर्नुस्) – Wow Sansar
मुख्य पृष्ठ /Video/Video ‘सोनिकाले पारसको १२ लाख चोरेको’ भन्दै समाचार सार्वजनिक भएपछि… (भिडियो हेर्नुस्)
Video ‘सोनिकाले पारसको १२ लाख चोरेको’ भन्दै समाचार सार्वजनिक भएपछि… (भिडियो हेर्नुस्)
अहिले पोखरामा रहेका पूर्वयुवराज पारसले आइतवार राति एउटा एटाटस लेखे । जसमा उनले आफ्नो सम्बन्ध विच्छेद भएको जनाएका छन् । तर त्यसमा को संग कस्तो सम्बन्ध विच्छेद भन्ने कुरा खुलाएनन् । उनले सो स्टाटस लखेको दुई घण्टामानै निकै धेरै कमेन्टको ओइरो लाग्यो । उनले यो रात छिनछिनमा स्टाटस अपडेट गरेको देखिन्छ ।
सामाजिक सञ्जाल फेसवुकमा उनले पोखरामा रहेको पनि पुष्टि हुने भिडियो सार्वजनिक गरेका छन् । जसमा उनी निकै खुसी देखिन्छन् । सम्बन्ध विच्छेद भयो भनेर लेखेको स्टटासमा आएका थुप्रै कमेन्टहरुको जवाफमा उनले फेरी दुई घण्टा पछि अर्को स्टाटस लेखेका छन् । उनले आफुले लेखेको त्यो स्टटासमा धेरै ब्यक्तिले खुसीको प्रतिकृया स्वरुप स्टाटस लेखेको भन्दै आश्चर्य ब्यक्त गरेका छन् । राती १२ वजे देखि ३ वजेको बिचमा उनले ८ वटा स्टाटस लेखेका छन् । उनले सो स्टाटस मार्फत सोनिकासंगको सम्बन्धमा पूर्ण विराम लागेको बताएका हुन् वा अरु कसैसंग खुलाएका छैनन् । उनको सो स्टाटस पछि सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न अनुमान लगाइएको छ ।
काठमाडौँमा भेटीईन प्रिती आले जस्तै युवती
एउटा घर झग,डाले परिवार नै सखाप । प्रहरीले पत्ता लगायो यस्तो महत्वपूर्ण क्लु (भिडियो सहित)
३९ जना पुरिए…. सिन्धुपाल्चोकको पहिरोमा भाग्य न्यौपाने पुग्दा हेर्नुहोस। (भिडियो हेर्नुहोस्)
पारसको १२ लाख सोनिकाले चोरेको खबरले बबाल, पारसले कसलाई दिए डिभोर्स ! [भिडियोसहित]